တွဲပြီး, မဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြာ& | Apg29
သိုးသငယ်၏အိမ်ထောင်ကိုရောက်လေပြီနှင့်သူ၏သတို့သမီးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးအဘို့, ကျွန်တော်တို့ကိုအမှီ ပြု. ဝမ်းမြောက်စေခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်လိမ့်နှင့်သူ့ကိုဘုန်းအသရေပေးပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 19: 7
ကမျြးစာကိုမင်္ဂလာဆောင်, သတို့သမီးနှင့်သတို့သားအကြောင်းအများကြီးကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့ဆွီဒင်အတွက်တဦးတည်းကသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လက်ထပ်ရန်သမ္မာကျမ်းစာမဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းအခိုင်အမာအတူကကွာရှင်းပြဖို့ကဒီအယူအဆဖယ်ရှားပစ်ရန်ချင်ပါတယ်!
သို့သော်ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးသင်ကြားမှုယရှေုသညျသတို့သားနှင့်ဘုရားကျောင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးကပြောပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုအကြားမြေကြီးမင်္ဂလာဆောင်သည်ကောင်းကင်၌ယေရှုနှင့်အသင်းတော်အကြားလာမည့်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ဦးပရောဖက်ပြုရုပ်ပုံလွှာ။
သူကမိမိအသွေးနှင့်ဝယ်ထားပြီးစင်ကြယ်သောသတို့သမီးနှင့်အတူတူညီသန့်ရှင်းအခါသင်နှစ်ဦးစလုံးသိုးသငယ်၏မင်္ဂလာဆောင်၏ပရောဖကျတို့၏ရုပ်ပုံငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် denigrates ရှိရာဖုန်သို့ပူးတွဲဆွဲသညျယရှေုတည်းခို။
အဆိုပါမိတ်ဖက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်, သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူပါပဲင်ကဆိုသည်။ သို့သော်ဤကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။ လက်ထပ်ခံရဖို့မ - ကမျြးစာကိုသင်လက်ထပ်ကြောင့်သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအတူလိင်ရှိသည်သောအစားသင်ပေးတယ်။ ကမျြးစာကိုရှင်းလင်းစွာသင်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းလက်ထပ်ရမနိုင်ကပြောပါတယ်။
ကမျြးစာကိုယာကုပ်၏သမီးဒိနနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူကိုပြောပြတယ်။ ထို့နောက်သူတစ်ဦးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူသည်မိမိအဘ, သွားနှင့်သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ သူတို့ကလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူပြီးသားအချင်းချင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြပါလျှင်သူလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ဘူး!
အဲဒီအစား, ကမျြးစာကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့လိင်ခဲ့မတိုင်မီသူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာကပြောပါတယ်။ သူတို့စုဝေးရောက်လာကြ၏နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့လိင်ခဲ့မတိုင်မှီကမျြးစာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ယောသပ်နှင့်မာရိ, ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးလက်ထပ်ခဲ့ဖော်ပြသည်။ သူမကသူမ၏သားဦး, ယရှေုခရစျသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောမှမွေးဖွားသည်အထိယောသပ်သည်သူ၏ဇနီးမာရိကိုမထိခဲ့ပါဘူး!
ကမျြးစာကိုတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ရက်သတ္တပတ်၏ပြော၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလျင်မြန်စွာအနည်းငယ်ကျော်အစည်းအဝေးများတွင်ကြောင်းဘာမျှမခဲ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါတီရှိခဲ့ပါတယ်။ မြေအောက်beöllopsveckanကိုလည်းညီလာခံတွင်ယေရှုအားချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြစ်လာသည်တဲ့အခါမှာခုနစျနှများအတွက်ကြာသောကောင်းကင်ဘုံရှင်မင်္ဂလာဆောင်ရက်သတ္တပတ်၏ပရောဖကျပွုရုပ်ပုံပါ! ကျနော်တို့တဦးတည်းကိုဖယ်ရှားလျှင်, ကျမ်းစာအမှန်တရားတွေပျောက်ကွယ်။
ဒါဟာသူသည်စပျစ်ရည်ကိုရေလှည့်ကျသောအခါယေရှုရဲ့ပထမဦးဆုံးအံ့ဖွယ်ကာနတစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်ပျက်မမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမင်္ဂလာဆောင်သခင်ယေရှုနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်သူ၏ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအကြားမင်္ဂလာဆောင်မှာပရောဖက်ပြုညွှန်ပြ။ တစ်ပါတ် - မင်္ဂလာဆောင်ထို့ကြောင့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူအဆိုပါမင်္ဂလာဆောင်နှစ်ခုနစ်၌ဖြစ်လိမ့်မည် - နှစ်ပေါင်းတစ်ခုလုံးရက်သတ္တပတ် - မဟာဘေးဒဏ်ကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာယခုတိုင်ကတည်းက။
သူကတစ်ချိန်ကကောင်းမွန်စွာမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတွေ့သောအခါယရှေုသညျအိမျထောငျရေးကိုအတူတွဲပြီးတူညီပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ယခုငါတို့ဒီအခြေခံရှိသည်, ငါတို့ပိုကောင်းနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သူကသူမငါးယောက်ျားရှိခဲ့ဖူးကြောင်းသူမ၏ပြောပေမယ့်ယခုသူမ၏ခင်ပွန်းမဟုတ်ခဲ့လေသည်။ တွဲပြီး, မည်သည့်အခါမျှမပါနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမခံရ။